ओलीले संसद विघटन गरेपछि बैद्यले के भने ? हेर्नुहोस वक्तव्यसहित — Sanchar Kendra
१विदेशी शक्तिको आडमा संविधान र मूल्य मान्यता मिच्ने काम भयो- प्रचण्ड
२एमाले कार्यालयबाट बालिका खड्का पक्राउ, यस्तो छ कारण
३माधव नेपालसँग वार्ता गरेको २४ घण्टा नबित्दै ओलीले गरे यस्तो खुलासा, नेता कार्यकर्ता आक्रोशित
४हुम्लामा वैशाखमा पनि हिमपात, स्थानीय दंग
५यी ५ देशका लागि नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्न बन्द, सूचनासहित
६कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा वैद्यले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?
७भारतमा एकैदिन ३ लाख १५ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
८कोरोना सङ्क्रमणबाट पत्रकार अधिकारीको मृत्यु, कुन अस्पतालमा उपचाररत थिए उनी ?
९चिनियां राजदूतलाई लक्षित गरी शक्तिशाली वि’स्फोट, चार जनाको मृत्यु, कसले लियो घटनाको जिम्मा ?
१०मौसमबारे आयो यस्तो नयाँ अपडेट, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ पानी ?
११एकाबिहानै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्यो
१२सकियो प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालबीचको वार्ता, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के भयो सहमति ?
ओलीले संसद विघटन गरेपछि बैद्यले के भने ? हेर्नुहोस वक्तव्यसहित
काठमाडाैं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन बैद्य ‘किरण’ ले संसद बिघटन गर्नुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदम भएका छन् । आइतबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव किरणले ओलीको यो कदम देशको विद्यमान राजनीतिक सङ्कट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको परिणाम हो भनेका छन् ।
‘सत्ता र सुविधाको लुछाचुँडीका निम्ति सत्ताधारी नेकपामा सुरुभएको अन्तरकलह र कचिङ्गल आज २०७७ पाैष ५ बिहानको मन्त्रीमण्डलको बैठकसम्म आइपुग्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने हदसम्म विकास हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरी आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्याबधि निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा गरेकी छिन् । यो प्रतिगामी कदम हो ।’ व्यक्तव्यमा भनिएको छ ।
सत्ता र सुविधाको लुछाचुँडीका निम्ति सत्ताधारी नेकपामा सुरुभएको अन्तरकलह र कचिङ्गल आज २०७७ पाैषर ५ बिहानको मन्त्रीमण्डलको बैठकसम्म आइपुग्दा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने हदसम्म विकास हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरी आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्याबधि निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा गरेकी छिन् । यो प्रतिगामी कदम हो ।
यस्तै ओलीले एकाएक संसद विघठन गरे लगत्तै बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय सत्ताको असफलताको संज्ञा दिएका छन् । विप्लवले संसदीय व्यवस्था असफल भएपछि ओलीले फासिवादको सहारा लिँदै संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
नेकपा स्थायी समिति बैठकले गर्यो ओलीमाथि गर्यो अनुशासन कारवाही
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव पर्सि ७ गते बोलााइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।
त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ । यस्तै, मंसिर ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेल सहभागी नभएका हुन् ।
प्रचण्ड–नेपाल निकट मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, रामेश्वर राय यादव र विना मगरले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वमाओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टले भने ओलीलाई साथ दिएका छन् ।
उता प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएका छन् । ओलीले आइतबार साँझ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक शैलेस थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएका हुन् ।
सबै सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बालुवाटार बोलाएका ओलीले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा छलफल गरेको बताइएको भए पनि अन्य आन्तरिक छलफलको बिषय बाहिर ल्याइएको छैन ।
ओलीको प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताका साथै अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले बिरोध प्रदर्शन गर्ने सक्ने संभावित कुरालाई ध्यानमा राखेर उक्त प्रदर्शनलाई कसरी दमन गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिसद‌बाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस र त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन र विरोध सुरु भइसकेको छ ।
यस्तै सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैकठले सरकारको संसद विघटनको भर्त्सना गरेको छ ।
सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसको भर्त्सना गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।
बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, मंसिर ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका बिरुद्ध ब्यापक बिरोध जनाएको छ । कांग्रेसले ओलीको कदम र पूर्व राजा ज्ञानेद्रको भन्दा पनि प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएको छ ।
नेपालमा एकैदिन २३५१ जनामा कोरोना पुष्टि, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १०५१ थपिए
स्टिङ अपरेशनका मुद्दा खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश